Izindawo ezishibhile zaseYurophu ziyisihloko esishisayo. Okokuqala nje, izivakashi e-Europe angabona yonke into kusuka enkulu ikhofi izitolo ukuze amabhishi amahle. As a result of cities like Venice, Rome, futhi Paris izigidi zezivakashi travel eYurophu minyaka yonke. Sidale uhlu izindawo eshibhe European abafundi bethu. Lolu hlu lubandakanya nokuthi ungafika kanjani lapho ngesitimela.
For directions on how to get to Porto’s Sao Bento esiteshini ngesitimela ufake Gcina Isitimela.
For directions on how to get to Valencia’s Station del Nord isiteshi sesitimela faka iwebhusayithi ethi Gcina Isitimela.